मिस वर्डमा एसियाबाट को-को उत्कृष्ट ? - Articles Nepal
मिस वर्डमा एसियाबाट को-को उत्कृष्ट ?
यि हुन ५ प्रतीस्पर्धी जो एसियाबाट मुख्य दावेदारकाे रुपमा चिनिएका छन । मिस वर्डकाे प्रतिस्पर्धामा उभिएका यि ५ जना एसियाबाट उत्कृष्ट मानिएका छन ।
Previous Post: बधाई १ लाख सेयर पुग्यो ! शृङ्खला सबैभन्दा अगाडी
Next Post: २२ वर्षीया कमलाले जन्माइन तिम्ल्याहा शिशु, अार्थिक अभावमा उपचार भएन